बाथरुममा किन यसो गर्छन् युवतीहरु ?
२०७५ बैशाख १५ शनिबार | प्रकाशित १७:१०:२२
बाथरुमको प्रयोजन सबैलाई थाहा छ । बाथरुमको प्रयोग जो कोहीले गर्छन् । हरेक दिन गर्छन् । के बुढा, के युवा सबैले बाथरुमा केही समय विताउछन् । यस्तोमा अपवाद हुने कुरै भएनन् युवतीहरु । तर युवतीहरुले वाथरुममा बढी समय विताउछन् । उनीहरु बाथरुममा के गर्छन् होला त ?
बाथरुममा युवतीहरु स्मार्टफोनमा व्यस्त हुने गर्छन् । स्मार्टफोन लिएर वाथरुम छिरेका उनीहरु लामो समय त्यसैमा व्यस्त रहने गर्छन् । स्मार्टफोनमा उनीहरु के गरेर विताउँछन् त ?
स्मार्टफोनमा उनीहरु सोशल साइटमा बिताउने गरेको पाइएको छ । उनीहरु फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम हेर्दै लामो समय बस्ने गरेका छन् । उनीहरु आफुले पोस्ट गरेको भिडियो, फोटो वा अन्य सामाग्रीको प्रतिक्रिया हेर्न पनि आतुर हुने गर्छन् । सोशल साइटमार्फत आफ्ना साथीहरुको प्रोफाइल हेर्ने, च्याट गर्ने गरेको पाइन्छ ।
४० प्रतिशत युवतीले यसरी वाथरुममा सोशल साइट हेरेर बस्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै युवाहरु चाहि मोवाइलमा गेम खेलेर बिताउने गरेको पाइन्छ । युवाहरुको यो बानीलाई ध्यानमा राखेर एचआर कम्पनीले गरेको एक शोधले अनौठो तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी वाथरुममा पसेर स्मार्टफोनसँग रमाउने युवा युवतीहरु सरसफाईमा भने सजग नहुने खुलासा भएको छ । उनीहरुले हात समेत नधुने बताइएको छ ।
यो सर्वेक्षण ५ हजार जना व्यक्तिमा गरिएको थियो । सर्वे अनुसार १३ प्रतिशत युवायुवती बाथरुममा क्यान्डीक्रस खेलेर बिताउने गर्छन् । जबकी ४३ प्रतिशतले वाट्सएपमार्फत च्याट गरेर बस्ने पाइएको छ ।